UBanco Santander wongeza ikhadi leVISA ukuze lisetyenziswe neApple Pay | Ndisuka mac
Ekupheleni kwale 2017 sibona inkqubela phambili enomdla malunga nokusetyenziswa kweApple Pay kwilizwe lethu. Kule meko, iindaba zifike izolo emini zivela kwinethiwekhi yoluntu yale bhanki ithandwayo ekufuneka ikhunjulwe yaba yeyokuqala ukubonelela ngeApple Pay kubathengi bayo eSpain.
Ngoku ukhuphiswano neApple Pay lukhohlakele kwaye kukuba amaziko amaninzi ajoyine inkonzo ngaphambi kokuphela konyaka. Ngokucacileyo sithetha ngeLa Caixa njengeyona mbangi iphambili ekusetyenzisweni kwale nkonzo kwaye inepotifoliyo ebanzi yokwenene yabathengi. Phambi kokuphela konyaka ezinye iibhanki ziya kongezwa kwinkonzo Iintlawulo ze-Apple NFC.
Le yi-tweet apho Ibhanki ibhengeze ukumiselwa yale nkonzo intsha yabathengi beVISA yekhadi lakho letyala:
#Bhanki yaseSandander $ SAN Ukuqala namhlanje iApple Pay ikwafumaneka kubathengi be @iamfanlalisa nekhadi @Visa_ES pic.twitter.com/wUTGa4uFzd
-Banco Santander (@bancosantander) 25 Oktobha ka-2017
Ngoku bonke abo basebenzisi abathengi beSantander kwaye bane-iPhone, iMac okanye iApple Watch baya kuba nakho ukusebenzisa ikhadi labo leVISA ukwenza intlawulo. Ukongeza, ibhanki ngokwayo ibhengeza ukuba unyuselo lweli khadi leVISA lusasebenza kwaye luyahambelana ngokupheleleyo nale nkonzo.
Inyani yile yokuba ukusukela oko iApple Pay yafika malunga neminyaka emithathu edlulileyo, iyeyona ndlela yentlawulo isetyenzisiweyo emhlabeni, igqwesa ukhuphiswano oluthe ngqo. Ukhuseleko, isantya kwaye ngaphezu kwako konke ukwenza intlawulo zezona zinto zibalaseleyo ze Inkonzo eqhubeka nokuphucula kunye nokuzinzisa phakathi kwabasebenzisi be-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UBanco Santander wongeza ikhadi leVISA ukuze lisetyenziswe neApple Pay
I-Xcom 2 ithengiswa ixesha elincinci kwiVenkile yeApple yeMac